Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes 5.2.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.2.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Cheetah Keyboard ကို မြန်ဆန်တိကျမှုနှင့်ပျော်စရာစာရိုက်စေသည်အခမဲ့ကီးဘုတ် app ကိုပါ!
အတူတူ auto-ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူ--💡Smartပြန်မယ်, လက်ဟန်စာရိုက်, AI အ-Power ဘီဘာအိုကိုအလွန်သင့်ရဲ့စာရိုက်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေတော်မူမည်
--🎨 ကီးဘုတ် themes များ ရာပေါင်းများစွာသင်တို့အဘို့တယောက်အမြဲရှိပါသည်။
--💰သင့်ရဲ့စာရိုက်သွားကြသောလုပ်နိုင်သည့် Funny အီမိုဂျီ, GIF စတစ်ကာများ။
--💰 မိမိစိတ်ကြိုက် ကီးဘုတ်ဆောင်ပုဒ်သင်သည်သင်၏ကီးဘုတ်အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံ, နောက်ခံပုံများ, အရောင်များ, font ကိုစတိုင်ကိုရွေးချယ်ကြကုန်အံ့။
🏆 အဘယ်ကြောင့် Cheetah Keyboard ကို - အီမိုဂျီ & Gif Keyboard ကို? 🏆
👯 3D ကာတွန်းရုပ်ပြောင် Keyboard ကို 👯:
cheetah Keyboard ကိုထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကလေးကြက်, duckling, ပြာ, ဖား, blowfish, ခွေးဘီလူးအဖြစ်ချစ်စရာ 3D ကာတွန်းရုပ်ပြောင်များကို
😂 Funny ရုပ်ပြောင် 😂
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပြောင်အနုပညာလက်ရာများ EmojiOne ပေးထားပါသည်။ သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့် chat သည့်အခါသင်ကရယ်စရာရုပ်ပြောင်ရှာပြီးရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
👯 Gif Keyboard ကို 👯:
ကျွန်ုပ်တို့၏ GIF ကိုစုစည်း Giphy ကထောက်ခံသည်။ ဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံး GIF များနှင့်လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပါရှိသည်။
🔥 3D Themes 🔥
cheetah Keyboard ကိုမှန်ကန် 3D အင်ဂျင်နှင့်အတူစစ်မှန်သော 3D Keyboard ကို themes များကိုပေး။ ဒီနေရာတွင် 3D Parallax themes များ, ဆွဲငင်အား themes များနှင့်အခြားသစ်ကို 3D themes များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
💡 စမတ်စာပြန်ရန် 💡
အချိန်ကုန်သက်သာ! ဒါဟာကီးဘုတ် app များကိုအကြားစမတ်စာပြန်ရန် function ကိုပိုင်ဆိုင်အလွန်ပထမဦးဆုံးကီးဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလက်ခံရရှိသောမက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်အခြေခံပြီး, သင်တို့အဘို့တုံ့ပြန်မှုပိုမြန် reply ဖို့အကြံပြုထားသည်။
📖 3D Touch နဲ့ Cool နောက်ခံဂရစ်ဖစ် 📖
cheetah Keyboard ကို - အီမိုဂျီ & Gif Keyboard ကို Google တွင်ပထမဦးဆုံး 3D Android အတွက်ကီးဘုတ် app ကို Store မှာ Play ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစာရိုက်တဲ့အခါ Cheetah Keyboard ကိုအေးမြ 3D သက်ရောက်မှုပြပေးလိမ့်မယ်။
🎨 ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အခမဲ့ Themes 🎨
အခမဲ့ကီးဘုတ် themes များ၏ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်း။ အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်အလယ်ဗဟို၌သင်တို့အဘို့အဦးတည်းရှိလိမ့်မည်။
🍭 သင်၏ကိုယ်ပိုင် Themes Create 🍭
ဥပမာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် themes များ andDIY ကြိုးစားပါ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများ, ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖော, ဂီတ (အသံ), ပြောင်းလဲနေသောဆိုးကျိုးများနှင့်ကီးဘုတ်၏အရောင်နှင့်အတူနောက်ခံနဲ့နောက်ခံပုံများပြောင်းလဲနေတဲ့။
💯 မြန် Swype 💯
စာအားဖြင့် input ကိုစာတစ်စောင်မှလိုအပ်ဘယ်သူမျှမကပဲ keypad မှတဆင့် Swype မှလက်ချောင်းများကိုအသုံးပြုပါ။ သုံးဆသင့်ရဲ့စာရိုက်မြန်နှုန်းဖြစ်နိုင်သောပါ!
🔔 Auto-ဆုံးမခြင်းရာထူးအမည် 🔔
အမှားတွေစာရိုက်ခြင်းဖြင့်မကျေမနပ်? မဟုတ် Cheetah Keyboard ကိုအတူ - အီမိုဂျီ & Gif Keyboard ကို! ဒါဟာအလိုအလျောက်ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူဆကျသှယျကူညီပေးဖို့သင့်ရဲ့စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုအလျောက်။
မှတ်ချက်: Cheetah Keyboard ကို - အီမိုဂျီ & Gif Keyboard ကိုခြေဟန်လက်ဟန်စာရိုက်, Next ကို-စကားလုံးအကြံပြုချက်, Smart စာပြန်ရန်နှင့် auto-ပြင်ဆင်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာအဘယျသို့နှင့်သင်ရိုက်ထည့်မည်သို့ဝေမျှစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီ app ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အခက်အခဲများခံစားနေရအသုံးပြုသူများကိုကူညီခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစာရိုက်အောင်စမတ်စာပြန်ရန် function ကိုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ စုဆောင်းဒေတာများကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်မည်မဟုတ်ပါနှင့် Cheetah Mobile ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အညီထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်။
🤝 ကြှနျုပျတို့ကိုကို Join 🤝
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/groups/679777278888114
ဒီဇိုင်နာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ဆက်သွယ်တှနျ့ဆုတျပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး: cm_design_platform@conew.com (http://launcher.cmcm.com)
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes အား အခ်က္ျပပါ
tendon စတိုး 1 2.34k
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes အခ်က္အလက္
App Name: Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes
File Size: 34.02MB
Release date: 2019-09-02 01:15:16
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ